ဟာသလေးများ စုစည်းမူ :) ~ ITmanHOME
ဟာသလေးများ စုစည်းမူ :)
ပီတာ တစ်ယောက် ပဲရစ်မြို့သို့သွားလည်သည်။ ရှုမျှော်ခင်းများကို ခံစားနေရင်း တစ်နေရာတွင် တစ်စုံတစ်ခုကို
သတိရလိုက်ပြီး ထွီခနဲ တံတွေးထွေးလိုက်သည် ။ ရဲ တစ်ယောက်ချက်ချင်းရောက်လာပြီး ဒဏ်ငွေ ၂၀၀
ကောက်သွားသည် ။ မိမိ နိုင်ငံသို့ပြန်လာသောအခါ လေဆိပ်တွင် မိန်းမဖြစ်သူက မေးသည် ။
"ပီတာ ဟိုမှာ အီဖယ်မျှော်စင်ကြီးက အရမ်းလှတယ်ဆို"
"မိန်းမချောလေးတွေလဲ ပေါမှာပဲ .. ပီတာ ရှင်ကျွန်မ ကိုသတိမရဘူးလားဟင်"
"သိပ်သတိရတာပေါ့ကွာ ဒါကြောင့် ဒဏ်ငွေ ၂၀၀ တောင်ဆောင်လိုက်ရသေးတယ်"
တစ်ခါက အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ် လူမျိုး(၃)ဦးသည် သဲကန္တာရ တစ်ခုတွင်ခရီးအတူသွားကြသည်။
တစ်နေရာရောက်သော် ပုလင်းတစ်လုံးကို တွေ့သည်။ ပုလင်းအဖုံးကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ ထိုပုလင်းကို စောင့်သော
နတ်သား တစ်ပါး ထွက်လာသည်။
(အာလာဒင်ပုံပြင် မဟုတ်ပါ) နတ်သားက တစ်ယောက်စီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆန္ဒ(၃)မျိုးကိုတောင်းဆိုစေသည်။
သို့နှင့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမှာ ငွေထုပ်ကို ပိုက်ပြီး မိမိနိုင်ငံကိုပြန်သွားရသည်။
နောက်ဆုံး တရုတ်လူမျိုး အလှည့်တွင် "ကျွန်တော်မျိုး ရေဆာတယ် ရေတစ်ပုလင်းအရင်ပေးပါ"
"ကျွန်တော်မျိုး သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတိရနေတယ်။ သူတို့ ဒီပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးပါ"
သား..........ဘွားဘွားက သားကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတော့....သားကြီးလာ ရင် ဘွားဘွားကိုယူမယ်။
ဖခင်.........ဟာ....ဖေဖေ့ မေမေကို သားယူလို့ ဘယ်ရမလဲ။ အဲဒီလို ပြော လို့မရဘူး
ဖခင်......... လူအ..၂ ရတယ်...ဟင်း...ဒါလေးတောင်မသိဘူး။ ဒါဆိုရင်ဖေဖေနဲ့ သားပေါင်းရင် ဘာရလဲ။
"အမှတ်ချင်း တူနေပြန်ပြီ ဆရာက ငါတို့ကို ခိုးကြည့်တယ် ပြောဦးမလား မသိဘူး"
ဖခင်........ဟင်း....ကျောင်းဖွင့်ခါစပဲ ရှိသေးတယ်။ ရမှတ်က သုညတဲ့...ဟင်း
ဖခင်.......... ကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးတာ စာမကြိုးစားချင်ဘူး။ ဖေဖေ့ တုန်းက
ဆင်းရဲလို့ ကျောင်းတက်ချင်တာတောင် မတက်ခဲ့ရဘူး။
အဲဒီကိုရုပ်ဆိုးဟာ သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဆရာဝန်ရဲ့အခန်းထဲကို ဝင်လာရင်းပြောရှာတယ်... ...
ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်း ကျနော့်အနားကို မလာချင်ကြဘူး၊
ကျနော့်ကို မြင်ကြတဲ့သူတိုင်း လှောင်ပြောင်ရယ်မောကြတယ်ဆရာ။ ကျနော့်ရုပ်ကြီးဆိုးနေတာကို
"လွယ်လွယ်လေး၊ အိမ်သုတ်ဆေးပုံးကို တောင်းထဲ ထဲ့လိုက်ပြီး ခေါင်းနဲ့ရွက်လိုက်၊ ကြက်တကောင်စီကို
လက်မောင်းမှာ ချိပ်လိုက်၊ ဘဲ၂ ကောင်ဆီကိုိ လက်တဖက်ဆီမှာဆွဲလိုက်"
အဲလိုနဲ့ အတူတူလျှောက်လာကြရင်း လမ်းခုလပ် လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်တော့
အဲဒီမိန်းမက ကိုထုံကို စွပ်စွဲပါတော့တယ်...
"ဗျာ...ကျနော့် ခေါင်းပေါ်မှာ ဆေးပုံးကြီးနဲ့တောင်းကို ရွက်ထားတယ်...လက်မောင်းမှာလဲ ကြက်တွေ
ချိပ်ထားတယ်၊ လက်နှစ်ဖက်မှာလဲ ဘဲတွေ ဆွဲထားရတယ်၊ ဒီလိုလူက ခင်ဗျားလေးကို ဘယ်လိုလုပ်
"ဘဲတွေကို အောက်ချလိုက်ပြီး ထွက်မပြေးနိုင်အောင် တောင်းနဲ့ အုပ်လိုက်လေ၊ ဆေးပုံးကို
တောင်းအပေါ်ကဖိထားလိုက်၊ ကြက်နှစ်ကောင်ကိုတော့ ကျမ ကိုင်ထားပေးမယ်"....တဲ့။
သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဆံသဆရာက သူမုတ်ဆိပ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးတွေကို စ, ရိတ်ပါတယ်..
မုတ်ဆိပ်မွေး နဲ့ နုပ်ခမ်းမွေးကို ရိတ်တဲ့အခါ ပြသနာ မရှိပေမဲ့ ပါးသိုင်းမွေးရိတ်တော့ နဲနဲ ခက်နေတယ်။
ဒါနဲ့ ဆံသဆရာက သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားနဲ့ အလုံးလေး တလုံးကိုပေးလိုက်ပြီး ပြောတယ်.. ...
"ဒါလေးကို ခဏငုံထားလိုက်၊ ဒါမှ ပါးသိုင်းမွေး ရိတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်"..
အဲဒီလူလည်း သဘောကျသွားတယ်၊ ဒီ ဆံသဆရာမဆိုးဘူး တော်တော်ဥာဏ်ပြေးသားဘဲ လို့ တွေးနေတယ်။
ညာဘက်ပါးကို ရိတ်တော့ ညာဘက်ပါးစောင်မှာ ငုံလိုက်၊ ဘယ်ဘက်ပါးကို ရိတ်တော့ ဘက်ဘက်ပါးစောင်
မှာ ငုံလိုက်နဲ့ လုပ်နေရင်း ဆံသဆရာကို လှမ်းနောက်လိုက်တယ်... ...
"ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ နောက်နေ့ 'အီး' ပါရင် ပြန်ထွက်လာမှာဘဲ မဟုတ်လား၊ အဲဒီတော့မှရေဆေးပြီး
ပြန်လာပေးပေ့ါ၊ တခြားသူတွေလဲ ဒီလိုဘဲ ပြန်လာပေးနေကျဘဲဟာ"...တဲ့။
ရေငုပ်သမားတစ်ဦး ရေငုပ်နေရင်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၁၅ပေခန့် အရောက်မှာ
ရေငုပ်ဝတ်စုံမပါတဲ့ တခြားလူတစ်ယောက်ကို သူနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ တွေ့လိုက်တယ်။
အဲ...သူ ပေ၃၀ ရောက်တော့လဲ ခုနလူကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။
တခါ ပေ၄၀ ထိ ဆက်ငုပ်တော့လဲ အဲဒီလူပါလာတုံးဘဲ...ဆိုတော့ အံ့သြမှုကိုမထိမ်းနိုင်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ ရေအောက်မှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Waterproof chalkboard ပေါ်မှာ စာရေပြီး မေးလိုက်တယ်...
ဟိုလူက သူ့ chalkboard ကို ဆွဲယူပြီး စာပြန်ရေးပြတယ်...
လူတစ်ယောက် ဆေးဆိုင်မှာ ဆေးလာဝယ်တယ်.. ...
"ဆိုင်ရာနိုက် တအောင်စလောက် ရောင်းပါ"
"ဘာ...ဆိုင်ရာနိုက်ဆိုတာ အဆိပ်ဗျ၊ ဆေးစာ မပါဘဲရောင်းလို့ မရဘူး၊ ခင်ဗျားက ဘာလုပ်မလို့ လဲ"
"ဟာ...ဆိုးလိုက်တဲ့ရုပ်ဗျာ၊ ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတာ ကျနော့်တသက် တခါမှ မမြင်ဘူးဘူး၊ ဒါဘယ်သူ့ပုံလဲ"
"ရထားဖြတ်သွားတိုင်း ကျွန်မတို့ အိမ်က ကုတင်က လှုပ်နေတတ်တယ်" ဟု အမျိုးသမီး တစ်ဦးက
အိပ်ရာကုတင်ရောင်းသော လူကိုဖုန်းဆက်သည်။ ထိုလူလာရောက် စစ်ဆေးသောအခါ ထိုလူအား
ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲလှောင်းစေပြီး ရထားလာချိန်တွင် ကုတင်လှုပ် မလှုပ် ကိုယ်တွေစမ်းသပ်ခိုင်းသည်။
ထိုလူကုတင်ပေါ်လှဲအချတွင် အမျိုးသမီး၏ယောက်ကျားပြန်အလာနှင့် တိုးသည်။
ငါးတွေ ဘာဖြစ်လို့ စကားမပြောသလဲ
ရေထဲမှာ ဆရာ စကားပြောကြည့်ပါလား
စာသင်နှစ် တစ်နှစ်ပြီးဆုံးလို့ ကျောင်းတွေပိတ်တော့မယ့် အချိန်ရောက်လို့လာပါပြီ။
မူကြိုဆရာမလေးကို သူ့တပည့်လေးတွေက လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပေးနေကြတယ်။
ပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သားလေးက ဆရာမကို လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပက်ကင်ထုပ်တစ်ခုပေးတယ်။
ဆရာမက ဖွင့်မကြည့်ဘဲနဲ့ ပြောလိုက်တယ်… …
“ဒီထဲကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဟာ ပန်းလေးတွေ ဖြစ်ရမယ်”
နောက် သကြားလုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သမီးလေးက ဆရာမကို လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပက်ကင်ထုပ်တစ်ခုပေးတယ်။
“ဒီထဲကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဟာ သကြားလုံးလေးတွေ ဖြစ်ရမယ်”
နောက်ဆုံးလက်ဆောင် ပက်ကင်ထုပ်ကတော့ အရက်ချက်စက်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့ သားလေးက ပေးတာ။
ဆရာမက လက်ဆောင်ပစ္စည်းကို ကိုင်ကြည့်တယ်၊ အရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်တော့
“ဒါ ဝိုင်တွေ ဖြစ်ရမယ်”
“မဟုတ်ဘူး ဆရာမ”…လို့ ကလေးက ပြန်ပြောတယ်… …
ဒါနဲ့ ဒီတခါခန့်မှန်းရင် ပိုသေချာအောင်လို့ ဆရာမက ထွက်ကျနေတဲ့ အရည်ကို လက်ဝါးနဲ့ခံပြီး
“ဒါ ရှန်ပိန်တွေ ဘဲ”
စိတ်မရှည်တော့တဲ့ ဆရာမက ကလေးကို မေးလိုက်တယ်….
“ဒါဆို အထဲက ဘာလဲ”
နားရွက် ၂ဖက်လုံးနီရဲနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ဆရာဝန်လာပြတယ်။
ဆရာဝန်က မေးတယ်… …
“ကျနော်မီးပူတိုက်နေတုံး ဖုန်းမြည်လာတယ်ဆရာ၊ အဲဒါ ယောင်ရမ်းပြီး မီးပူကို ဖုန်းအမှတ်နဲ့ နားထောင်လိုက်မိလို့”
“အော်…ဒါဆို နောက်တဖက်ကရော ဘာဖြစ်လို့ ရဲနေတာလဲ”
“အဲဒီ......ကာလနာ.....က နောက်တခါ ထပ်ခေါ်တယ်လေ”
သိပ္ပံဆရာမ။။ လျှပ်စီးလတ်တာနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနဲ့ ဘာကွာခြားသလဲကွဲ့။
ကျောင်းသား။။ လျှပ်စီးလတ်တာက မီတာခ ဆောင်စရာမလိုပါဘူး ဆရာမ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲက လူတစ်ဦးကို သူ့မိန်းမက အိမ်ကနေ တယ်လီဖုန်း လှမ်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်မ ထီပေါက်ပြီရှင့်၊ ရှင့်အ၀တ်အစားတွေ အသင့်ပြင်ထား”
“ဟန်ကျတာပဲ၊ ဘယ်အ၀တ်အစားတွေပြင်ရမှာလဲ၊ နွေရာသီအပန်းဖြေအ၀တ်အစားတွေလား၊
“မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ပြင်ပြီး၊ အိမ်ပေါ်က ဆင်းတော့”
စတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ဖောင်တိန်ပင်အရောင်းကောင်တာမှာ လူတစ်ယောက်က ဖောင်တိန်ပင် တစ်ချောင်း
ရွေးယူလိုက်ပြီး၊ အရောင်းစာရေးမကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ဒါ၊ ကျွန်တော့်မိန်းမကို အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားစေမယ့်လက်ဆောင်ပဲ”
“အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားစေမယ့်လက်ဆောင် ဟုတ်လား၊ ဒါလေးက ဘယ်လောက်ကောင်းနေလို့တုန်း”
“ဒီနေ့ သူ့မွေးနေ့လေ၊ သူက ကားလေးတစ်စီးဝယ်ပေးမယ် မျှော်လင့်နေတာ”
သူ့လူနာဆီကို၊ ကုသခကြွေးသွားတောင်းရာက စိတ်ဆိုးမာန်းဆိုးနဲ့ ပြန်ရောက်လာတဲ့ သွားဆရာဝန်ကို
သူ့မိန်းမက ဆီးကြိုရင်း မေးလိုက်ပါတယ်။
“မရခဲ့ဘူးကွ၊ ဒါထက်ပိုဆိုးတာက ငါစိုက်ပေးလိုက်တဲ့ သွားတွေနဲ့ ငါ့ကို ပြန်အံကြိတ်ပြလိုက်သေးတယ်ဟေ့”
“ဆရာ၊ ကျနော့် လည်ခြောင်းတွေယားပြီး ချောင်းဆိုးနေလို့ဆရာ”
“ဒီပြူတင်းပေါက်ကနေ ဟိုဘက်အိမ်ဘက်လှည့်ပြီး ခင်ဗျားလျှာကို ထုတ်ချည်သွင်းချည်လုပ်နေလိုက်”
“မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုဘက်အိမ်ကကောင်ကို ကြည့်မရလို့”
လူတစ်ယောက်က ဆရာဝန်ကိုလာတွေ့တယ်… …
“ဆရာ…ကျနော့်မိန်းမတော့ နားလေးသွားပြီလို့ ထင်တယ်”
“ကောင်းပြီလေ၊ သေချာသွားအောင် စမ်းကြည့်ဖို့ နည်းပေးလိုက်မယ်၊ ပထမ သူနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ
သူ့ကိုစကားပြောကြည့်၊ သူက ဘာမှပြန်မပြောရင် နဲနဲရှေ့တိုးပြီး ခုနစကားကို ထပ်ပြော၊ ဒါလဲ ဘာမှပြန်
မပြောရင် နဲနဲရှေ့ထပ်တိုးပြီး ထပ်ပြော၊ အဲလို လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်အကွာအဝေးရောက်မှ
“ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ အိမ်ပြန်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်”…ဆိုပြီး အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။
အိမ်ရှေ့တံခါးရောက်တော့ အိမ်ထဲကို လှမ်းအော်တယ်… …
“မိန်းမရေ…ညစာ ဘာဟင်းချက်လဲဟေ့” ဘာသံမှ မကြားရတော့ ရှေ့နဲနဲတိုးပြီး ထပ်အော်တယ်… …
“မိန်းမရေ…ညစာ ဘာဟင်းချက်လဲဟေ့” ဘာသံမှ မကြားရသေးဘူး…ဒါနဲ့ ရှေ့နဲနဲထပ်တိုးပြီး ထပ်အော်တယ်… …
“မိန်းမရေ…ညစာ ဘာဟင်းချက်လဲဟေ့” ဒါလဲ ဘာသံမှ ပြန်မကြားရဘူး.
အဲလိုအော်လိုက် ရှေ့တိုးလိုက်လုပ်လာလိုက်တာ မီးဖိုထဲ ဟင်းချက်နေတဲ့ သူ့မိန်းမ အနားထိရောက်သွားပါ
လေရော…ဒါနဲ့ ထပ်မေးတယ်… …
…အဲလိုလည်း မေးလိုက်ရော ဟင်းချက်နေတဲ့ သူ့မိန်းမက လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဒန်အိုးဖုံးနဲ့
သူ့ကိုလှမ်းခုတ်လိုက်ရင်း ပြန်ပြောတယ်… …
“ကဲဟယ်.. (ဂွမ်)…ဝက်သားနဲ့အာလူး ချက်ပါတယ်လို့ပြောတာ ဆယ့်တစ်ခါရှိပြီ”
လူသွားလူလာရှုပ်ထွေးတဲ့ လမ်းမဘေးမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ဓါတ်တိုင်တစ်တိုင်ကို ဖက်ထားသတဲ့။
သူဟာ အသက်ကို ရဲရဲမရှုရဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကို နဲနဲမှ မလှုပ်ရဲ နဲ့ တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါကို အနားမှာရှိတဲ့ ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုင်ထဲကနေလှမ်းမြင်တော့ သူ့ အရောင်းစာရေးမကို မေးတယ်… …
“ဟိုလူက ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ဓါတ်တိုင်ကြီးကို မလှုပ်မယှက်နဲ့ ဖက်ထားတာ၊ ကြာနေပြီ”
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ သူ ချောင်းဆိုးနေလို့ ဒီမှာ ဆေးလာဝယ်တာလေ”
“ဒါဆို ခု ဟာက ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ”
“သူ့ရောဂါက တော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့၊ ဘယ်ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနဲ့မှ မပျောက်လို့တဲ့”
“ခု သူချောင်းဆိုးတာ မတွေ့ပါလား၊ ဒို့ဆိုင်က ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ကောင်းကောင်းနဲ့ တွေ့သွားလို့လား”
“မဟုတ်ဘူးဆရာ၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေး အပြင်းစားပေးလိုက်တာ၊ အခု ဒီလူ ချောင်းဆိုးဖို့မပြောနဲ့